Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.5 Gabagabo
data Big meel kasta waa, laakiin waa iyo noocyada kale ee xogta dheehidda cilmi bulsheed la isticmaalayo waa ay adag tahay. In aan waayo-aragnimo ay jiraan wax la mid ah jirin guri qado bilaash ah cilmi, haddii aadan ku riday shaqo badan ururinta xogta, ka dibna aad u badan tahay in ay u socdaan in ay ku riday badan oo shaqo la falanqeeyo xogta aad ama fekerayo waxa su'aal xiiso leh si aad u weydiiso xogta. Iyada oo ku saleysan fikrado ah ee cutubkan, Waxaan qabaa in ay jiraan saddex siyood oo ugu weyn in ilaha xogta weyn wuxuu noqon doonaa ugu qiimaha badan cilmi bulshada:
mareysa daraasado xukumidda dhexeeya tartamaya saadaasha teori. Tusaalooyinka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah shaqada Farber (2015) (darawallada New York Taxi) iyo King, Pan, and Roberts (2013) (Faafreebka ee Shiinaha)
cabiraada bulshada hagaagay ah siyaasadda iyada oo nowcasting. Tusaale ka mid ah shaqada noocan ah waa Ginsberg et al. (2009) (Google Flu Isbeddellada).
qiyaasayo saamaynta sababaha la tijaabo dabiiciga ah iyo ku habboon. Tusaalooyinka shaqada noocan ah. Mas and Moretti (2009) (iskufilka saamaynta on saarka) iyo Einav et al. (2015) (saamayn of qiimaha laga bilaabo on Xaraashyada ee Arbacada).
su'aalo muhiim ah in badan oo cilmi bulsho lagu sheegi karo mid ka mid ah saddex kuwan. Si kastaba ha ahaatee, waji, kuwaas oo guud ahaan u baahan cilmi in badan in xogta keeno. Maxaa ka dhigay Farber (2015) oo xiiso leh waa dhiiranahay teori waayo cabbirka. dhiirogelin Tani teori yimaado meel ka baxsan xogta. Sidaas darteed, kuwa ku fiican yihiin weydiinaya noocyo ka mid ah su'aalaha cilmi baarista, ilaha xogta weyn wuxuu noqon karaa mid aad u barwaaqo ah.
Ugu dambeyntii, halkii ay ka aragti-driven cilmi taaban karo (taasoo ku soo jirtay diiradda on cutubkan), waxaan ku dhajisan karaa script iyo abuuro theorizing u mareysa-driven. Taasi waa, iyada oo raasamaal taxaddar of taaban karo xaqiiqooyinka, qaabka, iyo xujooyinka, annagu waxaannu ku dhisi karaan aragtiyo cusub.
Kale, Habkan xog-first to aragti ma aha cusub, oo waxaa ugu xoog caddeeyay by Glaser and Strauss (1967) ay call for aragti xeeldheer. Habka xog-horeysay Tani, si kastaba ha ahaatee, ma tilmaamayso "dhamaadka aragtida," sida ayaa sheegay in inta badan saxaafadda ku wareegsan cilmi da'da digital (Anderson 2008) . Saas ma aha, sida isbedel deegaanka xogta, waa in aan ka filan ah dib-u-miisaamid in xiriirka ka dhexeeya aragtida iyo xogta. In dunida ah, halkaas oo xog ururinta ahaa mid qaali ah, waxa macno u ururinaa macluumaadka in aragtiyaha soo jeedin noqon doonaa ugu waxtarka badan. Laakiin, dunida ah, halkaas oo tiro weyn ee xogta horay ayaa diyaar u ah oo lacag la'aan ah, waxa macno in ay sidoo kale isku dayaan hab xog-horeysay a (Goldberg 2015) .
Sida aan ku muujiyey in cutubkan, cilmi baran kartaa wax badan by daawashada dadka. In saddexda cutub ee soo socda, waxaan ku tilmaami doonaa sida aan u baran kartaa waxyaabo badan oo kala duwan haddii aan u qaabeeyo ururinta xogta iyo falgalaan dadka si toos ah by weyddiinaya (Cutubka 3), ordaya tijaabo (Cutubka 4), iyo xataa kuwii ku lug leh in habka cilmi-baarista si toos ah (Cutubka 5).